OTU ESI EDEBANYE AHA NA TWITTER - TWITTER - 2019
Otu esi emepụta akaụntụ Twitter
A na-akpọ K-Lite Codec Pack nke a na-akpọkarị codecs ka ọ bụrụ ụbọchị. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ maka nbudata. Ha dị iche iche. Nzukọ ọ bụla dị iche iche, ndị nzacha na egwuregwu na-akwado. Onye ọrụ ahọrọ ihe achọrọ, dabere na ọrụ ahụ. Na mbụ, a na-edozi ntọala k-Lite Codec Pack n'oge nrụnye. Mgbe ahụ i nwere ike ime mgbanwe na ha site n'ịkpọ ngwá ọrụ ndị ọzọ site na nchịkwa nchịkwa.
Ngwa maka ikiri vidiyo na K-Lite
K-Lite Codec Pack nwere ngwaọrụ abụọ maka ilele vidiyo. Egwuregwu Kọmputa Ndị Egwuregwu na Mgbe. Ha dị nnọọ ka ibe ha, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ iche na ha. Na Cinema Ụlọ Edemị gbakwunyere njirimara karịa karịa. Onye ọkpọ a nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ dịghị mkpa ịwụnye ngwugwu K-Lite niile, n'ihi na ngwugwu ahụ nwere niile codecs dị mkpa. Cinema, na-enye gị ohere igosi foto na ọtụtụ monitors na-agụnye ọtụtụ ntinye ederede. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ Ụlọ Cinéma. Ọ na-adị n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbakọ niile ma e wezụga Basik. Iji gbalịa mee ihe mgbe niile, ịkwesịrị ịwụnye mbipute Mega.
Na mbido, K-Lite Codec Pack dabeere na ọrụ nke ọfịs na-edepụta ihe ngosi ffdshow. Ihe kachasị dị mkpa bụ nnyekọrịta dị mma nke ihe ndị ahụ na ibe ya, ya mere njehie na-enweghị ihe ọ bụla. Na nhazi usoro ahụ, usoro ihe a na-enye gị itinye ihe a na-eme n'ọtụtụ mmemme. Ọzọkwa, a na-eji ntụziaka eme ihe n'usoro LPCM.
Ihe ntanye ntanetị nke ọma na-eme mgbanwe. Ọ dị mfe igbochi ojiji nke ọbịbịa nke ndị na-ede akwụkwọ n'ọtụtụ ngwa ozugbo. I nwedịrị ike wepu nza a site na ndepụta ihe omume ahụ, mgbe ahụ, a ga-eji ya mee ihe ọzọ na ya.
Ngosipụta na-egosi ụdị shei nke ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị dị mkpa.
Ndị na-ekpo ọkụ bụ components pụrụ iche nke kewaa data data n'ime akụkụ dị iche iche, nke a na-emezi ya site na ụda ọdịyo na vidiyo. Ha pụtara n'egbughị oge. Mgbe ị na-etinye K-Lite Codec Pack, ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche nke ndị kewara ekewa ma ọ bụ ngwaọrụ ndị na-adịghị.
Codec tweak ngwá ọrụ
Nke a na-enye aka na Codec Tweak Ngwá Ọrụ na-ejikwa arụmọrụ codecs. Site na ngwá ọrụ a ị nwere ike ịchọta codec na njehie ma gbanyụọ ya. Akụkụ ọzọ bara uru nke ọrụ a bụ ịmepụta ndabere. Site na nke a, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na emezughị ma ọ bụ na-emezighị emezi ọrụ, ọ ga-ekwe omume ịlaghachi n'ala ya.
Ihe omuma mgbasa ozi
Akụ a na-egosi akụkọ banyere koodu codecs. N'ebe a, ị nwere ike ịlele ozi zuru ezu banyere onye ọbụla ma chọpụta ebe njehie ahụ mere.
Mgbe ị wụnye otu K-Lite Codec Packs, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vidiyo ọ bụla ga-egwu n'enweghị nsogbu. Ọbụna otu nsụgharị dị mkpa zuru oke. Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ ga-enwe ike iji ohere mgbakọ ndị ọzọ: "Standart", "Full" na "Mega".
Ngwaahịa ahụ nwere ihe odide ndị dị mkpa maka nlele anya nke vidiyo ahụ;
Ihe niile ị ga - eme bụ melite ngwanrọ ozugbo ma chekwaa nsogbu niile na ịmegharị ọdịnaya;
Ọnụnọ nke ndị ọrụ mgbasa ozi zuru ezu na ngwugwu.
Download K-Lite Codec Pack maka n'efu
Download codecs ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị
Otu esi emezi K-Lite Codec Pack Anyị na-ahọrọ codecs maka Windows 8 Idozi njehie Vorbisfile.dll Melite codecs multimedia na Windows 7
K-Lite Codec Pack bụ setịpụ codecs nke na-enye nzaghachi ziri ezi nke faịlụ vidiyo nke ụdị ọ bụla na egwuregwu mgbasa ozi arụnyere na kọmpụta.
Atiya: Codecs Audio na Video maka Windows
Onye Mmepụta: Guide Codec
https://termotools.com ig.termotools.com © Twitter 2019